crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Doorka Keymaha iyo Kaalinta Deegaanka | HimiloNetwork
Doorka Keymaha iyo Kaalinta Deegaanka
Posted by: Zakariya in Wararka March 21, 2017	0 579 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Goob tiro baaxad sarreysa leh oo geedo ah ayaa si guud loogu yeeraa Keyn. Keymaha ifka oo dhan ku camiran waxay cabbirka dhulka kaga fadhiyaan 30%. Si kastaba, waxaa jira hoos u dhac la tilmaami karo oo ku socda baaxadda keymaha oo awalba boqolkiiba 50% ka aheyd dhulweynaha dunida.
Previous: 21 March: Maalinta Caalamiga ee Keymaha
Masjidka Norwich oo toddobaadle u quudinaya Darbi-jiifta.
Wax ka baro Hindiya!